Somaliland: Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi- 25 March 2018
• In kor loo qaado daryeelka macallinka ee dhinaca nolosha iyo tayada aqoontiisa.
• In aannu ahmiyad weyn siino waxbarashada Farsamada Gacanta, si da’yartu u helaan xirfado ay ku shaqaystaan. Sidaa darteed, waxaannu dib-u-dhis iyo dib-u-habayn ku samayn doonaa dugsiyadii farsamada gacanta Burco iyo Hargeysa. Waxa kale oo aanu hiigsanaynaa in gobol kasta laga sameeyo dugsi farsamo gacan oo bixiya waxbarasho tayo leh.
• Waxaannu dhiirigelinaynaa wax-akhriska ardayda reer Somaliland, Waxaannuna hirgelinaynaa maktabado wax-akhris (Public Libraries).
• Waxa kale, oo dib u habayn iyo tayayn ku samayn doonnaa waxbarashada Jaamacadaha dalka, si ay ula tartamaan dhigooda adduunka.
 Innaga oo og muhiimadda uu adeegga caafimaadku u leeyahay bulsho-kasta;
 Innaga oo og in waxa ugu qaalisan, uguna mudan in la daryeelaa ay tahay nafta bini’aadanka;
 Inaga oo og duruufaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalka;
• Waxaannu kordhin doonaa tirada dhakhaatiirta ee ka hawl-gala guud ahaan dalka, sababta oo ah, marka la eego saamiga dhakhaatiirta iyo dadka bukaanka ah (Patience-doctor ratio), halka dhakhtar ee ka hawl-gala hal goob caafimaad waxa ku soo beegmaya 13,500 oo bukaan ah.
• Waxa xoog la saari doona hubinta takhasuska iyo aqoonta dhakhaatiirta ka hawl-galka dalka Somaliland.
• Waxaannu adkayn doonaa ruqsadda furashada goob caafimaad, si aanay nafta qofka iyo caafimaadka muwaadiniintu u gelin ganacsi.
• Waxaannu dardar gelin doonaa awoodda iyo hufnaanta adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan cusbataallada dalku.
• Waxaannu dib-u-habayn iyo tayeyn ku samayn doonnaa Hayadda Ilaalinta Tayada (Quality Control Agency). Si loo hubin karo faya-dhawrka iyo tayada dawooyinka, cuntada iyo dhammaan wixii kiimiko ah ee dalka la keenayo.
• Wuxuu curyaamiyaa maamul-wanaagga.
• Wuxuu wiiqaa kalsoonida uu shacabku ku qabo hayadaha dawladda.
• Wuxuu lumiyaa adeegyada bulshada loo qabanayo.
• Wuxuu adhax-da ka jebiyaa horumarka.
Deg Deg: Faysal Muxu Ka Yidhi Shirki Golaha Amanka Somalia Iyo Lacagti Ay Ugu Deeqan Somaliland + Muuqaal
Somaliland: Afhayeenka Xisbiga Ucid Oo Wasiirka Ganacsiga Kabaha La Dul Maray